Vaky ny efijery iPhone X? Ity ny fomba fanamboarana azy anio! - Iphone
inona no dikan'izany rehefa mangidihidy palma ankavia
ny fomba fandoavana ny fitehirizana icloud
iphone fakan-tsary inona ny hdr
efijery iphone 6 manjelanjelatra
Ny efijery iPhone X-nao dia tapaka ary tianao hamboarina izany. Raha ny fampisehoana rava voalohany nataonao dia mety ho sarotra ny hahafantatra hoe aiza no hanombohana na inona ny safidinao rehefa mila manamboatra ny iPhone-nao ianao. Ao amin'ity lahatsoratra ity, aho hazavao izay tokony hatao rehefa vaky ny efijery iPhone X anao ary asehoy anao ny fomba fanamboarana azy anio !
Arovy ny tenanao amin'ny hazon'ny vera
Matetika rehefa mandatsaka ny iPhone-nao ianao ary vaky ny efijery dia mivoaka avy eo amin'ilay fisehoana ny shards vera kely. Matetika io vera io dia maranitra be ary afaka manapaka ny rantsan-tananao mora foana.
Mba hahazoana antoka fa misoroka izany tsy hitranga ianao dia tsara ny mametraka ny iPhone X ao anaty kitapo Ziploc na apetraka eo am-tampon'ny fampirantiana ny tadin'ny fantsom-panafody.
Diniho ny fomba tapaka ny efijery iPhone X anao
Alohan'ny hahitantsika izay safidy fanamboarana izay mety indrindra amin'ny efijery vaky iPhone X anao, dia tokony hojerenao aloha ny simba. Tapaky ny volo manify fotsiny ve sa vaky tanteraka ilay écran?
Amin'ny tranga tsy fahita firy, Apple dia mety hanao fanilikilihana amin'ny politikany fanamboarana raha kely ny fahasimbana, toy ny hoe misy vaky volo fotsiny ny écran. Izahay dia tsy afaka manome toky fa hanarona ny fanamboarana ho anao i Apple, fa raha misy vaky volo iray monja dia mety hitifitra izany.
Raha tena vaky ny écran dia tsy maintsy ianao no miantoka ny vidin'ny fanamboarana. Ao amin'ny fizarana manaraka amin'ity lahatsoratra ity dia hanampy anao hisafidy safidy fanamboarana tsara indrindra ho an'ny efijery iPhone X tapaka ianao.
ahoana no hahalalanao raha lehilahy gemini no mifankatia
Safidy fanamboarana ho an'ny efijery vaky iPhone X
Rehefa vaky ny efijery iPhone X dia manana safidy fanamboarana bebe kokoa noho izay noeritreretinao tany am-boalohany ianao. Etsy ambany, tanisiko daholo ny safidinao tsara indrindra!
Apple Store anao eo an-toerana
Raha rakotry ny AppleCare + ny iPhone dia angamba ny safidinao mora indrindra dia ilay Apple Store . AppleCare + manarona ny iPhone amin'ny tranga roa tsy nahy fanimbana. Raha mampiasa ny iray amin'ireo tranga nataonao ianao hanamboarana ny efijery iPhone X vaky, dia handoa $ 29 fotsiny ianao.
Zava-dehibe ny mitadidy ao an-tsaina fa raha zavatra hafa no simba rehefa nandatsaka ny iPhone X ianao (angamba ny nikatona ny bokotra ), Apple koa dia tsy maintsy manamboatra izany mba hanamboarana ny efijery. Raha singa anatiny sy ivelany maro no simba, dia mety hitombo kely ny sarany kelinao!
Raha ny iPhone X-nao tsy izany rakotry ny AppleCare +, ny Apple Store eo an-toerana dia tsy ho safidinao mora indrindra. Tamin'ny fotoana namoahana ity lahatsoratra ity dia $ 279 ny fanamboarana ny efijery iPhone X tsy misy antoka! Raha tsy te handany izany be any am-paosy ianao dia misy safidy mora vidy kokoa, izay horesahiko etsy ambany.
Puls, Orinasa fanamboarana an-fangatahana
hanin-kotrana dia orinasa mpanamboatra izay handefa teknisianina mivantana aminao. Azonao atao ny mampihaona azy ireo any am-piasana, any amin'ny birao, na any amin'ny fivarotana kafe eo an-toerana. Ny fanamboarana ny efijery iPhone X ataon'i Puls dia mora kokoa noho ny fanamboarana ny écran iPhone X tsy misy fiantohana ao amin'ny Apple SY Fanamboarana pils rakotry ny fiantohana mandritra ny androm-piainany .
Raha liana amin'ny fanamboarana Puls ny efijery iPhone X vaky ianao dia azonao ampiasaina ny kaody coupon anay PF10ND18 hitahiry 10% amin'ny baikonao. Raha tsindrio ny rohy ao amin'ny fehintsoratra etsy ambony dia hampiharina ho azy ny coupon!
Amboary ny tenanao
Raha toa ianao ka matoky ny haitao sy mahatoky ny fahaizanao dia azonao atao ny mieritreritra ny manamboatra ny efijery samirery. Raha mbola tsy nisolo efijery iPhone ianao teo aloha dia tena tsy mamporisika ny hanandrana izany amin'ny iPhone X.
Misy ampahany kely sy be pitsiny ao anatin'ny iPhone X-nao izay mora very na diso toerana. Raha averina amin'ny toerana tsy izy ny tadiny, tariby na singa hafa, dia mety hiafara amin'ny fanaparitahana tanteraka ny iPhone X. Raha ny fanamboarana dia tsara kokoa ny mamela eo am-pelatanan'ny manam-pahaizana ny fitaovanao.
Raha tena miatrika fanamby ianao amin'ny fanoloana ny efijery iPhone X tapakao dia alao antoka fa manana izany ianao fitaovana manokana takiana mba hamahana ny olan'ny fitaovan'ny iPhone!
Serivisy fanamboarana mailaka
Raha tsy maika be amin'ny fametrahana ny iPhone X ianao dia mety ho safidy tsara ny serivisy fanamboarana mailaka. Alefanao amin'ny orinasa mpanamboatra ny iPhone-nao ary averin'izy ireo eo am-baravaranao vetivety ihany izany.
iResQ dia orinasa fanamboarana mailaka azo antoka izay miasa tsara. Apple koa dia manana serivisy fanamboarana mailaka , izay safidy tsara ho an'ny olona tsy mipetraka eo akaikin'ny Apple Store.
Ny lesoka lehibe indrindra amin'ny orinasa fanamboarana-by-mail dia ny fotoana hampiodinana azy mety ho vetivety. Afaka andro vitsivitsy handefasana ny iPhone X anao any amin'ny orin'asa fanamboarana, avy eo mila roa andro ny fanamboaran'izy ireo, ary avy eo afaka andro vitsivitsy vao halefa any aminao. Raha fintinina dia mety maharitra 1-2 herinandro vao mahazo ny iPhone X-nao indray ianao.
Aza manamboatra azy mihitsy!
Ny vaky efijery kely sasany dia tena tsy dia lehibe loatra na tsy mampiditra. Raha toa ka mbola mavitrika sy mandeha ara-dalàna ny efijery iPhone X-nao dia mety ho afa-mandositra ianao amin'ny tsy fanamboarana azy mihitsy. Na izany aza, raha mikasa ny hanao fanavaozana, fivarotana indray, na fifanakalozana amin'ny iPhone X ianao dia mety tsy maintsy hamboarinao ny efijery amin'ny farany.
ny fomba hanafenana ny nomeraon-telefaonako
Miala tsiny aho raha maheno fa tapaka ny efijery iPhone X anao, saingy izao fantatrao ny fomba hanamboarana azy io haingana araka izay tratra. Raha mahafantatra olon-kafa amin'ny efijery iPhone X vaky ianao dia alao antoka fa zarao amin'izy ireo ity lahatsoratra ity!